Ra’iisul wasaare Kheyre oo la dar-daarmay ciidanka xooga dalka ee Balli Doogle – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo la dar-daarmay ciidanka xooga dalka ee Balli Doogle
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo weheliyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Mudane Shariif Xasan Sheekh Adem, wasiiro, xildhibaano ka tirsan labada aqal iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaa maanta kormeer ku tagey xerada ciidanka cirka ee deegaanka Balli Doogle ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Ra’iisul wasaaraha ayaa la dardaarmey ciidamaddii ku sugnaa xerada ee loo diyaariyey dib u xoreynta goobaha ay ku sugan yihiin Shabaab ee gobolka Sh/hoose, isagoo ku ammaanay ciidamadda dadaalada dheeraadka ah iyo howlgalladda lagu dabar-goynayo kooxda Al Shabaab.
“Waxaan aad iyo aad ugu qanacsanahay isbeddelada iyo fir fircoonida ciidamadda xoogga iyo waliba sida geesinimada leh ee u dagaalamayo askariga Soomaaliyeed” Sidaas waxaa yiri ra’iisul wasaare Kheyre.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaare Kheyre ayaa kula dardaarmay saraakiisha iyo ciidamadda xooggga dalka inay ilaaliyaan karaamada umadda Soomaaliyeed
“Haddii aan rabno in aduunka qiimi kulahaano qarannimaddii Soomaalyeedna si buuxda u soo celino, waxay ku xiran tahay ciidanka, ciidankuna inuu sharaf yeesho waxay ku xiran tahay in shacabka la dhowro lagana ilaaliyo kuwa cadowga ku ah. Xukuumadduna waxay xoogga saari doontaa in bil walba ay helaan xuquuqdooda, horeyna waan u bixinay mushaaraadka.” Ayuu hadalkiisa ku daray ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Ugu dambeyntii, wuxuu kullan la qaatay saraakiisha ciidamadda xooga dalka waxayna ballan qaadeen kor u qaadista akhlaaqada ciidamadda iyo ilaalinta xaq-dhowrka shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale dar-dargelinta howagalladda dalka looga xorreynayo kooxaha argagixisada.